Amazon Queen ka ciyaaraha WMS waa classic ah 20 Afyare payline qaar ka mid ah muuqaalada xariif dhabta ah. wilds Mire Waqaf oo xaqiiqdii waa mid ka mid ah. Oo dhigeeysa bonus aad karto cabsi badan ah 100 dhigeeysa free. wilds ayaa u timid inaad nolosha inta lagu guda jiro dhigeeysa free wareega caawinta aad ku guulaysato qaar ka mid ah xaddi weyn oo lacag ah. Sidaas, biiraan Queen of Amazons ee kulankaan booska xiiso leh ka WMS waayo fursad uu ku guuleysto qaar ka mid ah xaddi weyn oo lacag. Afyare Tani waxaa si gaar ah ka dhigay kuwa ciyaartoyda ceyrsaneysa kuwa guul weyn.
Amazon Queen biiray kulamada kale ee liiska kulan classic WMS booska casino la UNI- in madal mobile. Tan waxaa loo sameeyey by mid ka mid ah deeq boosaska WMS, Williams Interactive. Queen ayaa nafteeda u muuqataa cajiib ah ciyaarta iyo faahfaahinta kale ee graphic ku dar in tayada ciyaarta.
Waxaad soo duuduubo karaa meel kasta inta u dhaxaysa 20p inay £ 60 ku wareejin kasta oo ay la mid tahay kulamo badan Afyare.
The USP ee Amazon Queen in uu noqon xaqiiqda ah in uu ciyaaro labada dhinacba. i.e ka dhanka bidix ilaa dhankeeda midig iyo sidoo kale dhinaca midig iyo ilaa dhankeeda bidix. Sidoo kale faanaa kulan ee wilds Mire Waqaf oo ku ciyaari degtey kuwaasoo ka caawin kara in aad ku guuleysato lacag badan ilaa xad. duurjoogta The ( Astaanta biyo-dhac ah) u muuqataa on ambadeen ah 2 ama ku ambadeen 3 ama ku ambadeen 4 iyo bedelay oo dhan calaamadaha kale ee astaanta Amazon Queen marka laga reebo inuu kaa caawiyo inaad dalka isku darka guusha.
The calaamad Amazon Queen waa calaamad ku kala firdhi ee ciyaarta taas ugu. Isha ku hay waxa Waayo, sida 3 ama xataa ka badan 3 Amazon Boqorad sida ay keeni doontaa in qaar ka mid cajiib ah Free dhigeeysa. Imisa dhigeeysa free waxaad ka heli xiran tahay doonista inta jeer ee Amazon Queen calaamad u muuqata. 3 calaamadaha aad ku guuleystay toban dhigeeysa free halka 4 aad ku guuleystay 25 iyo 5 fidiyana natiijo weyn 100 dhigeeysa free bonus. The 10 iyo 25 gunooyin wareejin Free waa kuwo sahlan si aad u hesho halka 100 Waxaa laga yaabaa in u baahan tahay xoogaa of samir ka dhinacaaga.
free The dhigeeysa naftooda la retriggered karaa oo waa shiidaa aan xad lahayn. Tani waa khuseeya kale oo qabow ah kulankaan.
Tani waa mid ka mid safar duur ma aad rabto lahaa inuu seego!!
Amazon Queen waa ciyaar hit super ka WMS. guul ayaa aad u weyn oo ciyaarta laftiisa xiiso u ciyaaro. Hel 3 Saayiq on duntu ku xiga oo aad heli kara naftaada isagoo sida hodan sida Queen ah nafteeda. Sabirku waa furaha in kulankaan, keeni wiil kulankaan abaal samir jidka cabsi badan oo caynkaas ah. Sidaas, ma seegi quudhin this ee kaymaha.